DHINACYADII AY KHUSAYSAY DOORASHADU OO SHALAY KULAN KU YEESHAY HUTEEL MAANSOOR | Toggaherer's Weblog
KULMIYE OO SHACIYEY MAWQIFKIISA DIB U DHACA DOORASHADA DALKANA LOO DHISO DAWLAD KU MEELGAADH
WASIIR CAWIL OO MIISAANIYADII LAGA SUGAAYEY MAANTA HOR KEENAY G/WAKIILADA S/L
DHINACYADII AY KHUSAYSAY DOORASHADU OO SHALAY KULAN KU YEESHAY HUTEEL MAANSOOR
Hargaysa 1 Mar 2009 (THN)
Dhinacyada ay khusayso doorashada Madaxtooyada Somaliland, ayaa shalay kulan ka yeeshay geedi-socodka waqtiga hawlaha doorashada iyo cayimaada cusub ee maalinta doorashada.
Kulankaas oo shalay saacado badan ka socday Hotel-ka Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxaa ka qaybgalay wakiilo ka kala socday saddexda xisbi, Guddiga doorashooyinka iyo hay’adda Interpeace oo la shaqaysa Komishanka qaranka.
Inkastoo kulankaasi ahaa mid Saxaafadda laga fogeeyay, haddana siday sheegeen qaar ka mid ah dhinacyadii ka qaybgalay, waxa lagu lafo-guray qoraal la xidhiidha jidwal-hawleedka doorashada Madaxtooyada iyo sidii laysula meel-dhigi lahaa cayimaada waqtiga ay ku qabsoomi karto doorashadu, maadaama ay muuqato in aanay ku qabsoomi karin xilligii hore loogu heshiiyay ee 29 March 2009.
Warku wuxuu intaa ku daray, in Komishanka doorashooyinka iyo hay’adda dhinaca farsamada kala shaqaysa ee Interpeace ay ku muujiyeen qaabka ay u soconayso hawl-maalmeedka doorashadu, kaasoo ay ku sheegeen in 91 maalmood ka dib marka lagu dhawaaqo Qandaraas-bixinta waraaqaha cod-bixinta doorashada Madaxtooyada, ay ku qabsoomi karto doorashadu. Siday xogahaasi tibaaxeen, waxay dhinacyadani kulam dambe ka yeelan doonaan Isniinta beri, ka dib marka axsaabtu tashi gaar gaar ah ka soo yeelato aragtidooda la xidhiidha soo-jeedintan.
Sadexda xisbi siyaasaddeed oo min shan xubnood kulankaas uga qaybgaleen, waxa la sheegay in aanay isku aragti ka ahayn dib-u-dhaca doorashada iyo kala-hurida hawlaha horyaala Komishanka.
Ka sokow tibaaxahaas, Guddoomiyaha Komishanka doorashooyinka qaranka Jaamac Maxamuud Cumar (Jaamac Sweden) oo uu xalay waraysi khadka telefoonka kula yeeshay Wargeyska Ogaal, waxa uu ka gaabsaday inuu magacaabo muddada dib loo riixi karo doorashada ee ay soo-jeedintoodaa ku sheegeen. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in dhinacyada ay khusaysaa ka midaysan yihiin in si wadaniyad iyo masuuliyadi ku jirto isula eegaan qaabka ugu haboon ee dib u riixida doorashada oo hore loogu heshiiyay inay ku qabsoonto 29 March 2009 oo muddo koobani ka hadhay.
“Waad ogtihiin in waqtigii hore dhacay, hawshiina la doonayo in dib loo eego sidii looga lug bixi lahaa. Markaa taas uun bay ahayd, waanay socotaa hawshaasi.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyuhu. “Waxa weeye; dhinaca farsamada horeba Deeqbixiyeyaashu way uga warameen, lacag aynu leenahayna laguma qabanayeen waxa lagu fulinayaa lacag laynaga bixinayo.
Markaa iyagu (Interpeace) wixii talo ah ee dhinaca farsamada ayay muddo kooban ka hadlayeen….Laakiin, waxa laga tashanayaa sidii waqtigaa kooban ee nin waliba arkayo talo midaysan looga yeelan lahaa, sababtoo ah hawlo badan baa kordhinaya oo waa la wada ogyahay, arrimahaas uun baana laga hadlayay…..Wixii berigii hore lagu talogalay waxyaabaa kordhiyay sow maaha? Sida qaraxii iyo maalmihii la kordhiyanayay shanta cisho (Diiwaangelinta).
Markaa wixii inagu soo kordhiyay, sida laga yeelayo iyo waxyaabahaas uun baa laga hadlayay, Deeqbixiyeyaashuna nidaam bay leeyihiin oo qandaraasyadan Caalamiga ah iyo waxyaabahaas baa lagu samaynayaa. Sidaa darteed, waxa weeye in laga tashado, hawshuna imika way socotaa,” ayuu yidhi Jaamac-Iswiidhan oo wax laga waydiiyay inuu sii iftiimiyo ajandaha kulankaas iyo doorkii ay qoraalkaa soojeedinta ah ku lahayd hay’adda Interpeace.
Wuxuuna intaa raaciyay, “Waxa laga tashanayay sidii si wadaniyad leh loogu waajihi lahaa ilayn wax la kala leeyahay maaha oo waa arrin dan guud ah’e. Markaa hawshu si fiican bay noogu socotaa, axsaabtuna aad bay ugu rajo weyn yihiin, wax lagu qaybsan yahayna maaha oo masiir umaddeed oo dhan baa loo jeedaa….Arrinta ugu weyn ee laga wada hadlayay waxa weeye; inay dhinac u wada jeedno, in aynu ka tashano masiirka umadda, wixii ku kordhaya (doorashada) iyo sidii looga heshiin lahaa arrintaa. Komishanku isagaa leh go’aanka, laakiin waa in marka hore laysla eego, in la rog-rogo, lays qanciyo oo ay ka bislaato gudaheena.” Mar la waydiiyay waxyaabaha hortaagan inuu hawlgalo Mishiinka (Server) kala hufaya dadka isdiiwaangeliyay waxa uu yidhi, “Qoladii Qandaraaska lala galay ee ku lug lahayd Speed-ka (xawaaraha) Server-ku uu sekenkiiba (il-bidhiqsigii) samaynayo….Waad ogtihiin oo sawirka oo aan hore ugu jirina waa lagu kordhiyay (qaabka loo marayo kala-hufida). Markaa xawaarihii laga rabay inuu yeesho uun baa lagama maarmaan ah oo laga fiirsanayaa oo imika la wadaa.”
Waxa jira aragtiyo dhinacyo siyaasaddeed iyo dadweynaha reer Somaliland qabaan oo la xidhiidha in hay’adda Interpeace si weyn ugu milantay hawl-gudashada iyo go’aamada hay’adda Komishanka doorashooyinka qaranka. Sidaa darteed, Guddoomiyaha oo aanu waydiinay sida uu u arko arrintaas waxa uu ku jawaabay; “Hay’adda Interpeace waa mid latalin iyo taageero kula shaqaysa Komishanka, waxayna meesha ku joogaan heshiis oo arrintoodu waa mid farsamo iyo in Deeqbixiyeyaashu lacagta soo mariyaan.
”Wuxuuna tilmaamay in marka laga tago wixii talo dhinaca farsamada ah la xidhiidha, aanay Interpeace gacan ku lahayn talada xil iyo sharci ahaan ay u leeyihiin Komishanka doorashooyinku.
Mr Jaamac Maxamuud Cumar waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay dhinacyada ay khusaysaa talo midaysan ka gaadhi doonaan dib u dhaca doorashada Madaxtooyada. “Laba ama saddex maalmood bay qaadanaysaa,” ayuu yidhi.
Dhinaca kale, xisbiga Mucaaradka ah ee Kulmiye ayaa la sheegay inuu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqayo mawqifkiisa la xidhiidha dib-u-dhaca ku yimi doorashada Madaxtooyada, kaasoo todobaadyadii u dambeeyay dhowr jeer ka dhawaajiyay in aanay aqbalaynin in doorashadu dib uga dhacdo 29 March.
Sidoo kale, xisbiyada UCID iyo UDUB ayaa la filayaa inay aragtidooda arrintan ku saabsan ku dhawaaqi doonaan ka dib marka ay kulanka Isniinta beri ee dhinacyada doorashadu khusayso ay jawaabtooda soo-jeedintaa shalay u gudbiyaan.